U-Algar de Benagil ePortugal | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | Portugal
IPortugal iyizwe elincane kodwa elihle. Angimazi umuntu okwaziyo ukusho ukuthi uma sebevakashele leli zwe ngeke baphinde babuye, empeleni, bonke abantu engibaziyo abavakashele ePortugal bonke bajabule kakhulu ukuthi bafuna iholide elilandelayo ukubuya futhi jabulela amakhona amaningi kuleli.
Futhi kunjalo yize kubukeka njengezwe elincaneInezinto eziningi ongazibona futhi uthole ukuthi uma uhamba izinsuku ezimbalwa nje, uzosala ufuna okuningi ... Ngoba iPortugal izwe elifanele ukwazi kahle, ngaphandle kokuxhamazela kepha ngaphandle kokuma kancane. Uma ungenaso isikhathi sokwazi konke obukucabanga, kufanelekile ukuthi ufune olunye usuku lokuthola izingqimba eziningi zaleli zwe elihle nolwandle olubheke olwandle i-Atlantic Ocean.
1 U-Algar de Benagil ePortugal
2 Umhume omangalisayo owenziwe ulwandle
3 Ungafika kanjani emhumeni
4 Indlela enhle yokufika lapho: i-kayak
5 Unganqikazi ukulungiselela uhambo lwakho
Namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngenye yalawo makona akhethekile ongawathola ePortugal. Esikhundleni salokho, kuyikona okufanele ulivakashele uma uhlela ukuvakashela iPortugal eholidini lakho elilandelayo. Uma uhambela i-algar de Benagil, uzoba nethuba lokubhukuda olwandle olufihliwe, okungelula ukufinyelela kulo ... yilokho okunikeza yonke imilingo endaweni, e-Algar de UBenagil, kuyi-Algarve yesiPutukezi.
Le ndawo enhle itholakala eLagoa, eduze ncamashi nolwandle lwaseBenagil futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ongazibona kulo lonke elasePortugal, kepha ngingalokotha ngithi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ukubona nokuhlangana emhlabeni jikelele. Kuyamangalisa ngempela futhi kufanelekile ukuthatha uhambo ukufika kuleli qophelo futhi ulibone ngamehlo akho.
Umhume omangalisayo owenziwe ulwandle
Le ndawo ebhishi efihliwe ingumhume owakhiwe ngokwemvelo ngenxa yokuguguleka kolwandle okushaya emaweni amadwala iminyaka neminyaka. Ungabona uma uthi nhlá ukuthi amanzi angawahlula kanjani amandla amatshe ngokungaguquguquki.
Umphumela uba uhlobo lolwandle olungaphakathi komhume, lapho kukhona khona ilanga elincane ngezikhathi zasekuseni zosuku, lapho ilanga lishona ku-oculus phezulu, i-oculus nayo edalwe ngokwemvelo ngenxa yokushayisana kwamanzi. Isifiso sendalo nethuba kusivumela namuhla ukuba sijabulele indawo enhle njengoba lolu lolwandle luphonseke emhumeni wemvelo. Kubukeka kungakholeki kepha kuliqiniso ngokuphelele.
Ungafika kanjani emhumeni
Kungenzeka ukuthi ngemuva kokufunda isimanga ukuthi le ndawo ikhona, ucabanga ukuthi yindawo enzima kakhulu ukufinyelela kuyo, ukuthi mhlawumbe abantu abanolwazi olukhulu kakhulu yibo kuphela abazokwazi ukufinyelela khona bakwazi ukujabulela lesi simanga wamathuba nemvelo. Kubukeka njengendawo engafinyeleleki ngempela ezithombeni, kepha akukho okungaba kude neqiniso.
Lo mhume wasogwini utholakala cishe ngamamitha angama-60 ukusuka ebhishi lase UBenagil, ngakho-ke kulula kakhulu ukufika lapho ngokubhukuda noma ngisho nakumata uma ungakwethembi ukubhukuda kwakho okuningi. Kulula kakhulu ukuyifinyelela ukuze ukwazi ukujabulela le ndawo emangalisayo.
Mhlawumbe ufuna ukuthatha izithombe ezinhle, ngakho-ke ngikweluleka ukuthi uthathe ikhamera engangeni manzi nokuthi ngale ndlela ungathwebula ngaphakathi nangaphandle kolwandle. Enye indlela ukufinyelela nge-kayak futhi wenze wonke umbiko wesithombe futhi ujabulele lesi simangaliso seplanethi. Ngiyakuqinisekisa ukuthi uma usuyivakashele, awusoze wayikhohlwa le ndawo enhle.
Indlela enhle yokufika lapho: i-kayak
Yize kuliqiniso ukuthi ungafinyelela ngokubhukuda noma ngokhuni, ngikweluleka ukuthi ukhethe inketho ye-kayak manje. ukuthi amanzi ase-Atlantic ayabanda kakhulu futhi emhumeni ungenza futhi okupholile Noma ngabe kusehlobo ngoba cishe ayikho imisebe yelanga edlula kwi-oculus futhi ayishisi neze - lokhu futhi imininingwane enhle uma ufuna ukuyithola ngosuku olushisayo lwasehlobo, lapho uzokwazi ukuthi uzophola.
Amahora amahle kakhulu okungena emhumeni-olwandle ngokungangabazeki kusuka ngo-11 ekuseni kuze kube cishe yi-14 ntambama. Kula mahora kulapho ungathola khona ukukhanya okungokwemvelo okuningi ngaphakathi komhume nalapho izinga lokushisa lingcono ukukwazi ukujabulela imvelo kahle.
Unganqikazi ukulungiselela uhambo lwakho
Uma ufuna ukuvakashela isifunda se ILagoa E-Algarve, kufanele wazi ukuthi ithatha izivakashi kakhulu nokuthi inamabhishi amahle ngendlela emangalisayo lokho kuzokususa izingqinamba zakho. Yize ukhumbula ukuthi uma ujwayele amabhishi aseMedithera, lawa manzi ase-Atlantic awanakwenza lutho ngokwezinga lokushisa, ngoba amanzi ayabanda kunamanzi aseMedithera.
Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa ithuba lomsinga ophansi ukushisa ilanga kancane futhi ujabulele lesi sehlakalo esiyingqayizivele futhi esimnandi kakhulu. Mhlawumbe ngokubheka izithombe ezikule ndatshana ungathola umbono wobuhle bale ndawo futhi lokho kuyisizathu esanele sokuthi unqume ukupakisha izikhwama zakho uhambe kule ndawo yasePortugal futhi ujabulele iholide elihle.
Kepha khumbula ukuthi uma uhamba izinsuku ezimbalwa, uhambo lwakho kufanele lube nemisebenzi egcwele, ngoba iPortugal igcwele izindawo ezinhle. Uma ukwazi ukuqasha imoto futhi uthathe umzila, kungaba kuhle ukuze ngale ndlela, uthokozele zonke izimangaliso zayo. Futhi bane-gastronomy engakholeki futhi abantu babo banobungane futhi banomusa kakhulu. Futhi, ungakhohlwa ukuvakashela eLisbon lapho uvakashele ePortugal ngoba noma cishe kungamahora amathathu ngemoto usuka eLagoa, kufanele uhambo ukuthi uqedele ulwazi lwakho. Kepha-ke, ongakukhohlwa ukuvakashela kwakho emhumeni nolwandle olwenziwe ngumlingo wemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Portugal » U-Algar de Benagil ePortugal
I-Trinidad, umnyuziyamu wedolobha laseCuba owela othandweni